Inuu Tuchel Oo Baar Ka Shaqeeya Tababare Ka Dhigay, Kulankii Uu Klopp Casharka Muhiimka Ah Ugu Dhigay & Saamaynta Ralf Rangnick - Laacib
HomeWararka CiyaarahaInuu Tuchel Oo Baar Ka Shaqeeya Tababare Ka Dhigay, Kulankii Uu Klopp Casharka Muhiimka Ah Ugu Dhigay & Saamaynta Ralf Rangnick
Kaddib markii uu xalay soo baxay warka ah in kooxda Manchester United ay ku dhawdahay saxeexa tababaraha ree Germany ee Ralf Rangnick ayaa dib loosoo faqay hadalada uu hore uga yidhi ciyaaryahano iyo tababarayaal kala duwan oo kubadda cagta ah.
Ralf oo ku caan ah naanaysta “Professor” ayaa wax weyn kusoo kordhiyay guud ahaan kubadda cagta isaga oo ah hindisaha ciyaarta Geggenpressing ee cadaadiska iyo orodka ku dhisan isla markaana uu wakhtigan caanka ku yahay tababare Jurgen Klopp.
Rangnick ayaa saamayn kusoo yeeshay waayaha tababarenimo ee macalimiinta ugu caansan kubadda cagta Germany wakhtigan ee kala ah Klopp, Thomas Tuchel iyo Julian Nagelsmann oo Liverpool, Chelsea iyo Bayern Munich kala hoggaaminay.
Si kastaba ha ahaatee, Rangnick ayaa lasoo bandhigay hadal uu hore uga yidhi Thomas Tuchel iyo Jurgen Klopp oo kamida shaqsiyaadka falsafad ahaan wax ka faa’iday.
63 sano jirkaas ayaa sheegay in 2008 kulan ay 4-1 uga adkaadeen Borussia Dortmund oo uu Klopp hoggaaminayay ay sababtay in tababaraha Reds uu falsafadiisa Gegenpressing qaato ciyaartaas kaddib.
“Kooxdaydii Hoffeinheim waxay la ciyaareen Borussia Dortmund-tii Jurgen, iyaga 4-1 ayaanu ku garaacnay Jurgen ayaana yidhi ‘Qaab ciyaareedkayagu inuu dhab ahaan ahaa nooca kubadda cagta uu doonayo inuu Dortmund ku ciyaarsiiyo, laba sano gudaheed kooxda wuu bedelay qaabkaas ayuuna u ciyaarsiiyay.”
Markale Rangnick ayaa sheegay in Tuchel oo kubadda cagta da’yaraan ugaga fadhiistay sabab dhaawac uu shaqo ka siiyay kooxda da’doodu 15 sano jirka ka yartahay xilli uu ka shaqayn jiray xarun baar ah.
“Thomas aniga ayuu tababare igu noqday, waxa uu ahaa ciyaaryahankaygii kooxda Ulm waxaana ay noqotay inuu waayihiisa ciyaareed dhibaatooyin dhaawac jilibka ah usoo af-meero.”
“Isaga waxaan siiyay shaqada kooxdayada 15 sano jirka ka yar, isagu xataa muu qabin dareenka ah inuu tababare noqdo, waxa uu ka shaqaynayay baar ku yaala Stuttgart.”